दीपक पराजुली - कान्तिपुर समाचार
दीपक पराजुलीका लेखहरु :
झरी–वर्षाको हरेक याममा ऊ एउटा ओसिलो विम्ब बनेर मेरो सम्झनामा आइपुग्छ । ऊ मेरो स्कुले मित्र, अपूर्व । झरी पर्नु र मेरो मनको फाँटमा अपूर्वको सम्झना मडारिनु– वर्षौंदेखि मेरा लागि एउटा नियमजस्तै भइसकेको छ । कुरा दुई दशकअघिको हो ।
महर्षिको गुरुकुलबाट शिक्षादीक्षा प्राप्त गरी म घर फर्किएको थिएँ । उहाँको सान्‍निध्यमा रहँदा मैले संसारका सबैजसो शास्त्रको अध्ययन-चिन्तन गर्ने मौका पाएको थिएँ । शास्त्र चिन्तनप्रतिको मेरो लगाव देखेर महर्षिले मलाई सुचिन्तक नामकरण गरी दीक्षित गर्नु भयो र उज्जवल भविष्यको आशीर्वाद पनि दिनुभयो ।
त्यतिखेर म आफ्नै कोठामा अष्टावक्र गीता पढेर बसिरहेको थिएँ । थाहा छैन, ऊ कहाँदेखि आयो । अचानक मेरो अगाडि प्रकट भयो र भन्यो 'म महाभारत कथा सुन्न चाहन्छु ।' त्यसपछि मेरा जोरआँखाले उसको हुलिया पढ्न लाग्यो ।
प्रधानमन्त्रीको रहस्यमयी सपना !
ढोका खोल वत्स ! म तिमीलाई भेट्न आएको छु । चिन्यौ मलाई ? म तिम्रो गुरुको पनि गुरु । चिन्नेहरुले मलाई जर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल भन्छन् । तिम्रो गुरु कार्ल मार्क्सलाई द्वन्द्ववाद सिकाउने जर्मन दार्शनिक मै हुँ ।
यो सहरको सुन्दरताको बयान गरेर लियोनार्दो कहिल्यै थाक्दैनथ्यो । तीन वर्षअघि क्रिसमसको छेको पारेर ऊ पोखरा आएको थियो । त्यहाँदेखि उसको कण्ठले पोखराको अखण्ड कीर्तन गर्दै आएको हो ।